မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် Myanmar Democracy Congress: ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်နိုင်ငံရေးပြဿနာများ
တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာငွေဖြင့်မဲဆွယ်ခြင်း ( မောင်ထူးဆန်း )
မည်သည်.နိုင်ငံ ဘတ်ဂျက်မှလောက်ငှ သည်မရှိ ။ အစိုးရဌာန တိုင်းမှ လည်းအသုံးစရိတ်ကို အမြဲ တန်းတိုး၍သာလျှင် တောင်းဆို နေ၏ ။ ပြည်သူများမှလည်း သူတို.၏ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ရရန်ပိုင် ခွင့်ကို တိုး ၍သာလျှင်တောင်းဆိုသောကာလသည် ယခုကာလ မည်၏ ။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ၊ ပညာရေးဝန်ဆောင်မှု ၊ သက်ကြီး ရွယ် အိုများရံပုံငွေ ၊ ကလေးများအတွက်ထောက်ပံ့ငွေ ၊ အမျိုးသမီးများ တစ်နှစ်ခန်.လစာအပြည်.ဖြင့်မီးဖွားခွင့် ၊ ကလေး ထိန်းဌာန ၀န်ဆောင်မှု ၊ လူတိုင်းအိမ်ယာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိရေး စသည်ဖြင့် ပိုက်ဆံတို.က ဘယ်တော့မှ လောက်ငှသည်မရှိ အမြဲတောင်းဆိုနေတတ်ကြသည် ။ ဆိုလိုသည်မှာ မိမိ တိုင်းပြည်အတွက်မှလွဲ၍ မည်သူ.အတွက်မှ ပေးစရာမရှိ ။ နိုင်ငံကြီးများအတွက်ဆိုလျှင် စစ်အသုံးစရိတ် ၊ အာကာသအသုံးစရိတ် ၊ ထောက်လှမ်းရေးနှင့် သူလျှို စပိုင်အသုံးစရိတ်များက ထိပ်တန်းမှ ပါလိုက်သေး၏ ။ တိုင်းပြည်၏ စီးပွားရေးမူဝါဒ များသည် စီးပွားရေးမူဝါ ဒ သက်သက်မဟုတ်တော့ပဲ တိုင်းပြည်၏ အခွန်ဘဏ္ဍာကို အချိုးကျခွဲဝေရေး သာလျှင်ဖြစ်နေတော့၏ ။
တကယ်တန်းဆုံးရှုံးမည်က တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာငွေနှင့် ပညာရှင်တို.၏ အကြံဥာဏ်များဖြစ်လာပေမည် ။ ဆိုလိုခြင်သည်မှာ တိုင်းပြည် တကယ်ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းမရှိသော မဲရရုံသက်သက် ဘဏ္ဍာရေး အသုံး စရိတ်များကို ပြည်သူများ သည်းခြေကြိုက် မသွားရေးဖြစ်သည် ။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ် နောက်ပိုင်း ဥရောပတစ်လွှားရှိ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများ အားလုံး ( Welfare State ) များဖြစ်ကုန်ကြတော့၏ ။ လူထုက လက်ဝဲလက်ယာ ဘာမှမသိ ၊ သိပ်လည်း စဉ်းစားမနေ လူမှုဖူလုံရေးများ များပေးမည်ဟုဆိုသော လက်ဝဲယိမ်းပါတီများ ၊ လေဘာပါတီများ ၊ ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်များအား မဲထဲ့လိုက်ကြ တော့သည် ။
ဤအချက်များကား လွန်စွာအရေးကြီး၏ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ်သည် မည်သည်.စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ( သို. ) ငွေကြေးဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ချမှတ်လိုက်လျှင် တိုင်းပြည်ရှေ.ရေး မည်သို.ဖြစ်မည် ၊ ရွေးကောက်ပွဲ နိုင်မည် ( သို. ) ရှုံးမည် ၊ စီးပွားရေး တိုးတက်မည် ဆုတ်ယုတ်မည်ကိုသိနိုင်စွမ်းရ၏ ။ နိုင်ငံရေးပါတီ အများ စုကတော့ ရွေးကောက်ပွဲ နိုင်မည်.မူဝါဒများ ကိုသာချမှတ်လေ့ရှိပါသည် ။ တိုင်းရေးပြည်ရေးကိုနောက်ချန် ထားလေ့ရှိကြ၏ ။ ဤ သည်ကိုပြည်သူများက သတိထားမိလေ့မရှိကြ အချို.ပညာတတ်များနှင့်ပညာရှင်များ ပင်လျှင် မျက်စေ့လည် တတ်သည် ။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ၀န်ကြီးချုပ်သက်ဆင်လက်ထက်က ကျေးရွာများအား ဘတ် တစ်သန်းထောက်ပံ့ မည်ဟုမဲဆွယ်၏ ။ ထိုင်းတစ်နိုင်ငံလုံး ကျေးရွာများ ထောင်နှင့်ချီ ရှိသဖြင့် တိုင်းပြည်၏ ဘဏ္ဍာငွေ ဘတ် သန်းထောင်ပေါင်းများစွာ ကို ရွေးကောက်ပွဲ အသုံးစရိတ်အဖြစ် အသုံးချလိုက်ခြင်းဖြစ်တော့သည် ။ တိုင်းပြည် ၏ ဘတ်ဂျက်ကို မဲဆွယ်ပွဲအတွက် သုံးပစ်သော သက်ဆင် ၏ မူဝါဒကိုလူကြိုက်များခဲ.သည် ၊ လက်ရှိ ရှပ်နီ လှုပ်ရှားမှုများက ထိုမူဝါဒ ၏ အကျိုးဆက်သာလျှင်ဖြစ်သည်ဆိုက မမှားနိုင်ပေ ။
ကျွန်ုပ်တို.စိုးရိမ်သည်က လူလယ်နိုင်ငံရေးသမားများ၏ ပေါ်ပင် ရဲရဲတောက် မူဝါဒများကို တိမ်း ညွတ်မသွားစေ ရေးဖြစ်၏ ။ ပြည်သူအားမက်လုံးများပေး၍ အာဏာရလာသော အခါတွင်လည်း ထိုမက်လုံး များကို အကောင်အထည်ဖေါ်ပေးခြင်းဖြင့် အာဏာသက်ဆိုးရှည်အောင်လုပ်မည့် နိုင်ငံရေးပါတီများ ကိုသ တိထားဖို.ဖြစ်သည် ။ တကယ်တန်းဆုံးရှုံးမည်က တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာငွေများ သာလျှင်ဖြစ်၏ ။ အာဏာမရ သောနိုင်ငံရေးသမားများမှလည်း အာဏာရပါတီအား အင်အားချိနဲ.ယုံသက်သက် ၀ါဒဖြန်.ခြင်းမျိုးသာ လုပ်ဆောင်၍ ပြည်သူအား ရဲရဲ တောက် မိန်.ခွန်းများပြောသည့် တိုင်းပြည်အတွက် အရေ မရအဖတ်မရသော နိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ရပ် ထွန်းကားလာမှာကိုဖြစ်၏ ။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 6:22 PM
ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်နိုင်ငံရေး ပြဿနာများ (၃)
ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်နိုင်ငံရေး ပြဿနာများ (၂)
ပါတီဥက္ကဌ ဦးကောင်းမြင့်ထွဋ်နှင့် Myanmar Time Jour...